अन्तरवार्ता Archives - Citypokhara
कालिका भ्यु टाउनको वृक्षारोपण
२०७५ साउन २६ , शनिबार August 11, 2018 by Citypokhara.com
पोखरा । लायन्स क्लब अफ पोखरा कालिका भ्यु टाउनले शनिबार वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २८ को शान्ति मैदानदेखि ठूलाकोटसम्म निर्माण गरिएको फुटट्र्याकको दायाँबायाँ वृक्षारोपरण गरिएको हो । लायन्स क्लब इन्टरनेसनल ३२५ बीवानका सिनियर एओज�
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङ भन्छन्-‘प्रदेशको समृद्धिका लागि मन्त्री बनें’
२०७४ चैत्र १६ , शुक्रबार by Citypokhara.com
पाेखरा । प्रदेश ४ संयोजक किरण गुरुङ मुख्यमन्त्री पदको आकांक्षी बन्दा केही दिन पार्टीभित्र चर्को बहस भएको थियो । पार्टी सचिव एवम् मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र उनीमध्ये को हुने भन्नेमा चलेको बहस सहमतिमा टुंगियो । किरणले पृथ्वीसुब्बालाई सम�
२०७४ माघ २९ , सोमबार February 12, 2018 by Citypokhara.com
क्यान महासंघ कास्कीको आयोजनामा नवौं संस्करणको इन्फोटेक हुँदैछ । पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा फागुन ४ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने इन्फोटेकसँग केन्द्रित रहेर क्यान महासंघ कास्कीका सचिव तथा प्रदेश नं. ४ का सदस्य विकास भुर्तेलसँग गरिएको कुराकानी : क्�
‘गठबन्धनकै कारण एमाले हार्छ’-कृष्ण केसी(अन्तर्वार्ता)
२०७४ मंसिर् १८ , सोमबार December 4, 2017 by Citypokhara.com
तपाईंलाई भोट किन दिने ? कस्ता छन् एजेन्डा ? अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको विकास, शान्ति र समृद्धि हो । यसका लागि मेरा एजेन्डाहरु मुख्यतया यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा केन्द्रित छन् । यी पूर्वाधार पूरा गरेपछि मात्र दिगो विकासका कार्यक्रम सञ्च
‘राजनीतीमा आस्था र निष्ठा जरुरी छ’ : नरेश शंकर पालिखे
२०७४ मंसिर् १७ , आईतवार by Citypokhara.com
नेपालमा राजनिती के का लागि गर्ने भन्ने विषयको उत्तर नै पाउन नसकिरहेको बेला आसन्न निर्वाचनमा प्रदेश सदस्यका लागि कास्की निर्वाचन क्षेत्र नंम्वर २ अन्र्तगत प्रदेश २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नरेश पालिखेले एक शब्दमा भने, “निष्ठा र गलत प्रबृत्तिको बिरुद्धमा लड�
२०७४ साउन २४ , मंगलवार by Citypokhara.com
वैदेशिक रोजगार युवाहरुको पहिलो रोजाई हो । गाउँका चोक वा गल्लीमा पनि एसईईपछि अव त विदेश जाने होलानी? यो भनाई नसुन्ने सायदै कोहि नहोलान्, तर यो भन्नु आम नेपालीको रहर होईन बाध्यता हो । देशमा रोजगारको अवसर नभएपछि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको विव
इनर्जेटिक र कन्फिडेन्ट(Energetic and Confident) ले मिस एसइइ(MISS SEE)को उपाधि चुमेकी अस्मिताको नेत्ररोग विशेषज्ञ बन्ने लक्ष्य
२०७४ आषाढ १० , शनिबार June 24, 2017 by Citypokhara.com
नेपालमा महिला र पुरुषको आन्तरिक र वाह्य क्षमता प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न खालका व्यूटी तथा हेन्सम प्रतियोगिताहरु महिनै विच्छे हुने गर्छन भन्दा फरक पर्दैन् । यस्तै पोखरामा पनि माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (SEE) दिएर बसेका छात्राहरुलाई सवल, सक्षम बनाई उनीहरुका प�
पर्यटकिय धिताल गाउँ: चुलाचौकोदेखि वडा कार्यालयसम्म चुनावकै रन्को-पंगेनी
२०७३ चैत्र २१ , सोमबार April 3, 2017 by Citypokhara.com
पोखरा । कास्की जिल्ला अन्र्तगत माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वडा नम्वर ६ साविकको धिताल गाविस । जिल्ला सदरमुकामदेखि १७ दशमलव २ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ । तर अहिले पोखरा लेखनाथ महानगर पालिककाको छिमेकी गाँउपालिका । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सो वडामा सवारी साधनको �